Fomba malagasy - Instant Malagasy
Fomba malagasy: fanandratana ny hasina maha-malagasy, tsy ho hitan'ny hafa ihany fa indrindra ho tsapan'ny tena amin'ny maha-Malagasy ny tena. Iray amin'ny fanomezan-kasina ny fomba malagasy ny fahafantarana ny fisiana, na fara-faharatsiny fahafantarana ny tantarany. Maro dia maro ireo fombatsika, notinaizan'ny lovantsofina, nanaraka ireo tarazo nifandimby, niampita tamin'ny taranak'Ikaky sy i Neny saingy very anjavony ankehitriny.
Meloka eo anatrehan'ny tantara ireo manadino ny nentin-drazana. Ary farahidiny ny taranaka tsy mba manana haren-tsaina. Eto aho dia te-hanasa anao, ndao isika hiara-hanoratra indray ny tantara, hiara-hanangona ny tapa-porohana sisa tsy may. Ento ny ampahany amin'ny fantatrao, ampiako ny sombiny amin'ny fantatro dia hanana ny erany isika. Raha mahafantatra na te-hametraka ny asa soratrao ary ianao ato amin'ity takelaka ity dia aza misalasala manoratra aty amiko. Ity ny rohy, fenoy ary alefaso fa hovaliko faran'izay haingana ianao.
Eto am-piandrasana ny asa soratrao, dia mba efa nisy kely ireto voatsirambin'eritreritra, ampahany amin'ny betsaka mbola tokony hozaraina, fomba malagasy, maha-isika antsika.
Par Parfait Partout le 22 Novembre 2013 à 16:08
Instant Malagasy - Créer votre site pro avec Eklablog - CGU - Signaler un abus -